OTU ESI MALITEGHARỊA OPERA NCHỌGHARỊ - OPERA - 2019
Nsogbu Opera: esi malitegharịa ihe nchọgharị ahụ?
A na-ewere ngwa ngwa dị ka otu n'ime ihe nchọgharị kachasị adaba na nchekwa. Ma, o sina dị, na ya enwere nsogbu, ma ọ bụ nke ahụ. Ọtụtụ mgbe, nke a na-eme na kọmputa dị ala ma na-emepe ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke taabụ, ma ọ bụ na-agba ọtụtụ usoro "arọ". Ka anyị mụta otu esi malitegharia Opera nchọgharị ma ọ bụrụ na ọ kwụ.
Na-agwụ n'ụzọ ụzọ
N'ezie, ọ ga-aka mma ichere ruo mgbe oge ụfọdụ ka nchọgharị ahụ jụrụ oyi na-amalite ịrụ ọrụ, dika ha na-ekwu, ọ ga-ada, wee mechie taabụ ndị ọzọ. Ma, ọ dị mwute, ọ bụghị mgbe niile usoro ahụ n'onwe ya nwere ike ịmaliteghachi ọrụ, ma ọ bụ mgbake nwere ike iwepụ ọtụtụ awa, onye ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ n'ime ihe nchọgharị ugbu a.
Nke mbụ, ịkwesịrị ịgbalị imechi ihe nchọgharị ahụ n'ụzọ ziri ezi, ya bụ, pịa bọtịnụ dị nso n'ụdị obe dị ọcha na-acha uhie uhie nke dị na akuku aka nri nke nchọgharị.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe nchọgharị ahụ ga-emechi, ma ọ bụ ozi ga-apụta na nke ị ga-ekwenye na ị ga-emechi ya, n'ihi na usoro ahụ anaghị aza. Pịa bọtịnụ "Ghọta Ugbu a".
Mgbe a mechibidoro ihe nchọgharị ahụ, ị ​​nwere ike ịmalitegharịa ya, ya bụ, iji Malitegharịa ekwentị.
Malitegharịa iji njikwa ọrụ
Ma, ọ dị mwute ikwu na e nwere oge mgbe ọ na-emeghị ihe ọ bụla iji mechie ihe nchọgharị ahụ n'oge a na-egbu egbu. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike iji ohere ndị ị ga-eme iji mezue usoro nke Windows Task Manager na-enye.
Iji malite Task Manager, pịa nri na Taskbar, yana na menu ndị na-egosi, họta ihe "Run Task Manager". I nwekwara ike ịkpọ ya site na ịpị Ctrl + Shift Esc na keyboard.
Na ndepụta Task Manager nke ga-emepe, a na-edepụta ngwa niile na-adịghị agba na ndabere. Anyị na-achọ Opera n'etiti ha, anyị na-ejiri bọtịnụ aka nri dị na ya pịa aha ya, ma na menu ndị a na-ahọpụta họrọ "Wepụ Task". Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-emechi ihe nchọgharị Opera, na gị, dika dị na ikpe gara aga, ga-enwe ike iweghachi ya.
Mmecha usoro nhazi
Ma, ọ na-eme mgbe Opera anaghị egosipụta ọrụ ọ bụla n'èzí, ya bụ, a naghị egosipụta ya n'ozuzu na nyocha ihuenyo ma ọ bụ na Taskbar, mana n'otu oge ahụ ọ na-arụ ọrụ na ndabere. Na nke a, gaa na "taabụ" Task Manager.
Tupu anyị emepee ndepụta nke usoro niile na-agba na kọmputa, gụnyere usoro ndabere. Dịka ihe nchọgharị ndị ọzọ na engine Chromium, Opera nwere usoro dị iche maka taabụ ọ bụla. Ya mere, usoro ọsọ ọsọ na-emetụta ihe nchọgharị a nwere ike ịbụ ọtụtụ.
Pịa na ọ bụla na-agba ọsọ opera.exe usoro na bọtịnụ nri ziri ezi, na họrọ "Usoro Ọgwụgwụ" ihe na menu. Ma ọ bụ naanị họrọ usoro ma pịa bọtịnụ Delete na keyboard. Ọzọkwa, iji mezue usoro ahụ, ịnwere ike iji bọtịnụ pụrụ iche na ala n'akụkụ aka nri nke Task Manager.
Mgbe nke ahụ gasịrị, windo na-egosi ịdọ aka ná ntị banyere nsogbu nke ịme ka usoro ahụ mechie. Ma ebe ọ bụ na anyị chọrọ ịmaliteghachi ihe nchọgharị ahụ, pịa bọtịnụ "Njedebe".
A ghaghị ime usoro yiri nke ahụ na Task Manager na usoro ịgba ọsọ ọ bụla.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ bụghị naanị na ihe nchọgharị nwere ike kpọgidere, mana kọmputa ahụ dum. Dị ka ọ dị, n'ọnọdụ ndị dị otú a, enweghi ike ịmepụta onye ọrụ ọrụ.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ichere ka kọmputa malitegharịa. Ọ bụrụ na echere echere oge, mgbe ahụ ị kwesịrị ịpị pịa bọtịnụ "ọkụ" na usoro ihe omume.
Ma, ọ bara uru na-echeta na site na ngwọta dị otú ahụ, onye ekwesịghị imetọ ya, dịka mmegharia "ọkụ" ugboro ugboro nwere ike imebi usoro ahụ.
Anyị atụlewo ikpe dịgasị iche iche nke ịmalitegharịa ihe nchọgharị Opera mgbe ọ kwadoro. Ma, nke ka nke kachasị mma, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịtụle ike nke kọmputa gị, na ịghara iji nnukwu ọrụ na-ebute ya.